6A 7A 8A China Fire Assay Crucible Manufacture And Factory Magnesia Cupel for Melting Gold uma kuqhathaniswa nemikhiqizo efanayo emakethe, inezinzuzo ezivelele ezingenakuqhathaniswa ngokusebenza, ikhwalithi, ukubukeka, njll., futhi ijabulela idumela elihle emakethe. I-Xngtailong ifingqa iziphambeko zemikhiqizo edlule futhi iqhubeka ikuthuthukisa. Imininingwane ye-6A 7A 8A China Fire Assay Crucible Manufacture And Factory Magnesia Cupel for Melting Gold ingenziwa ngendlela oyifisayo ngokwezidingo zakho.
I-Cupel i-refractory enezimbotshana yokumunca i-lead oxide lapho umlotha uphephetha ibhande lomthofu. Ingxenye eyinhloko ye-magnesia i-magnesium oxide, eyi-refractory enhle kakhulu futhi engakwazi ukumelana nokuguguleka kwe-alkaline flux. I-lead oxide iyi-alkaline flux enamandla kakhulu. Emazingeni okushisa aphezulu, ukuhlobana phakathi kwe-lead oxide ne-silica kunamandla kakhulu, okungahlasela i-silicate ku-cupel. Kukhona i-silicate eyengeziwe ku-ash cupel kanye ne-cement cupel. Ngemuva kokuvunguza ngalolu hlobo lwe-cupel, kuzoba nemigodi ebusweni bekhabethe, futhi izinsimbi eziyigugu zizolahleka ngenxa yalokho. Ukusebenzisa i-magnesia cupel, ayikho into enjalo ngemva kokufutha komlotha, ingaphezulu libushelelezi kakhulu.
Kwakha uphawu lomkhiqizo. Idizayini yesithombe emisha kuyo iphakamisa ukuthi okuthengiswayo okupakishwayo akukhona nje okunye okuthengiswayo.
3.Ingabe uyalamukela ibhizinisi le-OEM?
1.Iqembu:Sinethimba lethu elethu ukwenza ucwaningo, ukuklama, ukukhiqiza nokudayisa.
2.Umlando:Siyinkampani ehlanganiswe no-R&D, ukukhiqizwa nokuthengisa ngokuphelele,
I-3.Equipment: Sinomugqa ophelele wokukhiqiza kanye nemishini yokuhlola, kuhlanganise nomugqa wokukhiqiza othomathikhi.
Ipharamitha yomkhiqizo weMagnesia Cupel
Isetshenziselwa ukuncibilikisa nokuhlola
Ukumelana nokushaqeka okuphezulu okushisayo
I-Silica, i-Silicon dioxide 0-5%
Impahla yomkhiqizo weMagnesia Cupel
I-refractoriness ephezulu (1100 centigrade degrees)
Izinga lokubuyisela lingu-97% -98.5%
Ukuhlukahluka komkhiqizo weMagnesia Cupel
I-Ceramic cupel, i-cupel block, i-cupel tray, ihlangabezana nezidingo zokucaciswa okuhlukahlukene, amamodeli avamile ayatholakala esitokisini.
Ukucaciswa komkhiqizo weMagnesia Cupel
6A,7A,8A,9A cupel ayatholakala esitokweni
Ukucaciswa komkhiqizo we-Magnesia Cupel block
6 hole cupel block, 12 holes cupel block, 24 holes cupel block, kanye namasampuli amaningi angavuthwa ngesikhathi esisodwa, afanelekele ikakhulukazi izikhungo zokuhlola ezinevolumu enkulu yokuhlola
Ukuthengisa okuqondile kwemboni yezimpahla eziningi
Izimbobo eziyi-12 ze-cupel block
Izimbobo ezingama-24 ze-cupel block
Yiba nendawo yethu enkulu yendawo yokugcina impahla ezimele, ukukhiqizwa ngobuningi, ukunciphisa kakhulu izindleko, ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende nganoma yisiphi isikhathi.
Ukupakishwa komkhiqizo weMagnesia Cupel
Ikhabethe livamise ukupakishwa kuma-PCS angu-200,300,500 ibhokisi ngalinye, agcina epakishwe kuphalethi yokhuni enamaphakheji okuphepha angu-100%. Futhi kungenziwa egcizelele ngokusho emaphaketheni ikhasimende, ubuntu more, more ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende
Ukuhlola impahla eluhlaza
Sinomugqa wokukhiqiza ophelele kanye nemishini yokuhlola, kufaka phakathi umugqa wokukhiqiza othomathikhi
Sinethimba lethu elethu ukwenza ucwaningo, ukuklama, ukukhiqiza nokudayisa
Siyinkampani ehlanganiswe no-R&D, ukukhiqizwa nokuthengisa ngokuphelele